फागु पूर्णिमा(होली) पर्वमा कुनै अवाञ्छित एवं अमर्यादित गतिविधी हुन नदिन प्रहरी सजग : प्रउ रेग्मी – ebaglung.com
फागु पूर्णिमा(होली) पर्वमा कुनै अवाञ्छित एवं अमर्यादित गतिविधी हुन नदिन प्रहरी सजग : प्रउ रेग्मी
२०७४ फाल्गुन १६, बुधबार ०९:११	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
डम्मर बुढा मगर, बागलुङ २०७४ फागुन १६ । हिन्दुहरुको प्राचीन महान पर्व फागु पूर्णिमा (होली) आउन अब एकदिन बाँकी छ । हिन्दु संस्कृतिमा यो फागु पर्व प्रत्येक वर्षको फागुन शुक्ल पूर्णिमाको दिन वसन्त ऋतुमा मनाइन्छ । यो नेपाल, भारत लगायत अन्य राष्ट्रमा रहेका हिन्दूहरूको एउटा महत्वपूर्ण चाड हो । यसलाई रंगहरुको पर्वको रुपमा लिईन्छ । फागु अर्थात होलीको दिन मानिसहरू एक अर्कामाथि विभिन्न प्रकारका रङ्गहरू (अबिर) दलेर मनाउँछन् ।
फागु अर्थात होली पर्वलाई भगवान विष्णुका परम भक्त प्रह्लादसंग जोडेर हेरिन्छ । पौराणिक भनाइ अनुसार त्रेता युगमा हिरण्यकशिपु नामक एक जना राक्षसको जन्म भएको थियो । हिराण्यकशिपुका छोरा प्रह्लाद थिए । प्रह्लाद भगवान विष्णुका निकै भक्त थिए । आफ्नै छोरा प्रह्लाद भगवान विष्णुलाई भज्ने गरेको हिराण्यकशिपुलाई सह्य थिएन । त्यसैले उनले प्रह्लादलाई मार्न आफनी वहिनी शोलिकालाई प्रयोग गरेका थिए । होलिकाले आगोमा भष्म पार्न लाग्दा उनि आफै आगोमा भष्म भएकी थिइन र त्यही दिनदेखि होलीका पर्व शुभारम्भ भएका विश्वास गरिएको छ ।
बागलुङकी प्रशिद्ध कालिका भगवती मन्दिरमा फागु पूर्णिमाका दिन स्थानीयहरुले पूजा गरी फागु गाउने परम्परा रहि आएपनि पछिल्लो समय त्यो लोप भएर गएको छ । विशेष गरी स्थानीय नेवार समुदायले कालिका भगवती मन्दिरमा पुगेर पूजा अर्चना गरी फागु गाउँदै बजार परिक्रमा गर्ने परम्परा केहि वर्ष यता देखिन छोडेको छ । फागु पूर्णिमाको दिन कालिका भगवती मन्दिरमा जम्मा भएर पूजा अर्चना गरी फागु गाउँदै बजार परिक्रमा गर्न कालिका भगवती गुठीले केहि जग्गा गुठ राखेको छ । यस फागु पर्वमा बालबालिका, युवायुवती देखी बृद्धाहरु समेत फागु खेल्दै बजार परिक्रमा गरेको उल्लासमय वातावरण केहि वर्ष यता देख्न नपाईएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।
परापूर्व कालदेखि उल्लासमय वातावरणमा मनाईदै आएको यो पावन पर्वमा विभिन्न रंगहरु पानीमा घोलेर पिच्कारी, गोला बनाएर एकापसमा हान्ने (छर्किने) गरिन्छ । पछिल्लो समय पानीका गोलाहरुमा विभिन्न रसायनिक पदार्थ मिसाएर छ्यापाछ्याप गर्ने, अर्काको ईच्छा विपरीत रंग प्रहार गर्ने, गन्तव्यमा हिँडिरहेका खासगरी महिलाहरुमाथी लुकीछिपी रंग प्रहार गर्ने, मादक पदार्थ सेवनगरी अश्लील हर्कत गर्ने आदि उच्छुंखल प्रवृत्ति बढ्न थाले पछी यसलाई सभ्य र भव्य बनाउन नागरिक समाज, प्रहरी, प्रशासनले केहि सजकता अपनाउन थालेको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी उपरीक्षक दिपक रेग्मीसंग आसन्न फागु (होली) पूर्णिमा पर्वलाई शान्तिपूर्ण एवं मर्यादित रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि प्रहरीले के कस्तो सुरक्षा योजना बनाएको छ भनी ईबागलुङले केहि जिज्ञासी राखेको थियो ।
प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले फागु पूर्णिमालाई मर्यादित बनाउन कुनै अवाञ्छित गतिविधि एवं कसैको इच्छा विपरीत कुनै अश्लील कार्य हुन नदिन प्रहरी सतर्क र सजक रहेको बताए ।
उनले होलीका अवसरमा कसैको ईच्छा विपरीत रंग हाल्ने, रंग घोलेको पानीका लोला प्रहार गर्ने, वा पिच्कारी हान्ने, फागु खेल्ने निहुँमा दुषित पानीले छ्याप्ने, अमर्यादित र अभद्र व्यवहार गर्ने, यात्रुहरुलाई अवरोध खडागरी अनावश्यक दुख दिने गतिविधी नियन्त्रणगर्न प्रहरीले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।
प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले फागु पूर्णिमा (होली) लाई शान्तिपूर्ण, सुरक्षित एवं मर्यादितरुपमा सम्पन्न गर्न जिल्लाका सबै प्रहरी निकायहरुमा निर्देशन दिईएको जानकारी दिँदै मादक पदार्थ सेवन गरेर हो हल्ला गर्ने, अनियन्त्रित सवारी चलाउने, सामाजिक सद्भाव र मेलमिलाप भड्काउने गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याईने बताए ।
प्रवास : युएईमा एकता समाजको संगठन बिस्तार केन्द्र देखि एरिया सम्म !
कति जनालाई खुवाईयो हात्तीपाईले रोग बिरुद्धको औषधी ? तथ्याङ्क आउन केही दिन लाग्ने !